Igugu Elifihliwe phakathi Kwemvelo (Igumbi Lendlovukazi) - I-Airbnb
Igugu Elifihliwe phakathi Kwemvelo (Igumbi Lendlovukazi)
Indlu itholakala endaweni eseceleni eseceleni, enokubukwa okumangazayo kweJamison Valley kanye neMount Solitary ngemuva kwendlu! Indlu ihlezi phakathi kwesizinda sehlathi esinokuthula nezinhlobonhlobo zezinyoni zendabuko ezivakashela nsuku zonke. Indawo edumile yokubuka i-Lincoln Rock kanye nokuhamba ehlathini e-Wentworth Falls konke kungaphakathi kwebanga lokuhamba.
Abantu abavela kuzo zonke izizinda bamukelekile, futhi ifaneleka ngokukhethekile imibhangqwana NOMA umuntu omdala onengane encane.
Igumbi litholakala ngemuva kwendlu, libheke ngemuva kwegceke elimangalisayo nangale kwalokho. Kukhona ukufudumeza endlini yonke, kanye nokufudumeza okwengeziwe ekamelweni nasendlini yokugezela.
Ekamelweni lakho: kukhona itiye nekhofi -ukwenza amalungiselelo; kanye nesiqandisi sebha egcwele ushokoledi, amanzi, ubisi nezithelo. I-32" LED TV (ephinde isebenze njengemonitha ye-PC) enesidlali se-DVD esakhelwe ngaphakathi. Ihitha yekholomu kawoyela, indawo yokubeka imithwalo namaslipper athokomele kunikezwa ukuze ujabulele futhi ukhululeke. Umbhede wakho ohlanganisiwe olingana neNdlovukazi uza nomatilasi owengeziwe. i-topper KANYE nezingubo zokulala zikagesi ezilawulwa ngokuzimela.
Igumbi lokugezela lihlome ngokuphelele ngezinto zokufudumeza, amathawula, ama-rails afudumalayo, insipho yesandla, isomisi sezinwele, ishampoo, i-conditioner kanye ne-QV Body Wash.Igumbi lokugezela liyabelwa kuphela uma elinye igumbi lezivakashi (igumbi lamawele) lihlala abantu; kungenjalo uzoba nguwe wedwa oyisebenzisayo.
Njalo ekuseni, isidlo sasekuseni esilethwe kahle (esilungiswe umsingathi) sizonikezwa endaweni okwabelwana ngayo. Imenyu ye-BF ihlanganisa nokusanhlamvu, isinkwa kanye nezinhlobonhlobo zokusabalalisa; ngamanzi, ijusi kanye netiye ukuze ujabulele. Ngaphezu kwalokho: ikhofi esanda kwenziwa izoqala usuku lwakho! Ikhishi lingase lisetshenziswe izihambeli ukushisisa ukudla noma ukulungisa ukudla okulula kuphela (ngicela ungakuthosi okujulile noma ukuthosa!)
Kunezilungiselelo zangaphandle ezinethezekile ezinikezwe endaweni egandayiwe ngemuva kwendlu. Sicela uzizwe ukhululekile ukuzulazula egcekeni lethu lendabuko elinemizila ezulazulayo, i-pergola emboziwe, ichibi lemvelo nezindawo zokuhlala ukuze ubungaze ukubuka okuhle kwe-Jemison Valley. Umgodi womlilo onezihlalo zamatshe (egcekeni) indawo ekahle lapho ungajabulela khona ngaphandle ngengilazi yewayini!
Ukuhamba ibangana nje kuphela: kunezindawo zokudlela eziningi ezinhle nezindawo zokudlela e-Wentworth Falls, Leura naseKatoomba.
Ukungena Kwezivakashi: ngesango elingaphambili NOMA isango eliseceleni eliseduze negaraji.
Umgwaqo wethu we-cul-de-sac usendaweni eseceleni ye-Wentworth Falls, kude nanoma yisiphi isiminyaminya, umsindo noma ukungcola. Kuwukujikijelwa kwetshe kusuka ezindaweni eziningi eziphumulele kanye nokubuka okumangalisayo okufana ne-Lincoln's Rock ne-Rocket Point Lookout (ukubala okumbalwa). Impilo yezinyoni echumayo emini, nezigidi zezinkanyezi ebusuku: ipharadesi lomthandi wemvelo ngempela.
Siyalithanda ikhaya lethu ngakho-ke sichitha isikhathi esiningi ngangokunokwenzeka kulo. Sizoba lapha ukuze sikwemukele futhi singakujabulela kakhulu ukukunikeza iziphakamiso mayelana namathilomu, izindawo ezikhangayo zendawo kanye nolwazi lokuhamba ehlathini njll.
Siyalithanda ikhaya lethu ngakho-ke sichitha isikhathi esiningi ngangokunokwenzeka kulo. Sizoba lapha ukuze sikwemukele futhi singakujabulela kakhulu ukukunikeza iziphakamiso mayel…
Inombolo yepholisi: PID-STRA-7354